က်ေနာ့္ေဘးနားက ျဖတ္သြားတဲ့ ေခတ္ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင္ကာ
က်ေနာ့္ေဘးနားက ျဖတ္သြားတဲ့ ေခတ္	Posted by mm thinker on January 1, 2012
Posted in: Obituary.	Tagged: Obituary.	13 Comments
၂၀ဝ၄ ဝန်းကျင်မှာ လစ်ဗင်းကာလာ ခေါ် LC မဂ္ဂဇင်းရုံးခန်းကို မကြာခဏ ကျနော် ရောက်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူမရှိဘူး၊ ယေးလ်ကို ဖဲလိုးရှစ်သွားနေတယ်။ အယ်ချုပ် ကိုကျော်မင်းဆွေကို အကြောင်းပြုပြီး ရောက်ရောက်နေမိတာ။ အောင်ကျော်စိုးနဲ့ ကျနော်နဲ့ နှစ်ယောက်ပေါ့။
၂၀ဝ၅ မှာတော့ မဂ္ဂဇင်းကို အလည်အဖြစ်နဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး၊ အယ်ဒီတာအဖြစ် ကျနော် ရောက်သွားပြီ။ ခါးသီးကျပ်တည်းတဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကျနော့်အဖို့ LC ဟာ နွေးထွေးတဲ့၊ အဆင့်အတန်းရှိစွာ နေရာပေးခံရတဲ့၊ အနာဂတ်အတွက် ပုံသွန်းလောင်းပေးခြင်း ခံရတဲ့ ဘုရားသခင်ပေးသော နေရာပါပဲ။
စာတွေ အများကြီးဖတ်ဖြစ်တယ်။ သူက အတွေးအခေါ်ကအစ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအဆုံး အားလုံးမျှဝေ သင်ပြတယ်။ “မင်း” “ငါ” နင်ပဲ ငဆ တခါမှ မပြောဖူးဘူး။ မကျေနပ်ရင် ဒဲ့ပြောလေ့ရှိတယ်။
သူပြောဖူးတာတွေမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိတယ်။ တနေ့ သီတင်းကျွတ်လား ဘာလား မမှတ်မိတော့။ ရုံးကစုပြီး ဂါရဝေါစ နိဝါတောစပေါ့။ အယ်ဒီတာမတွေ တနှစ်ပြီးတနှစ် ကလေးတွေသာမွေးတယ်၊ အရည်အချင်းကျ ဘာမှ တက်မလာဘူးဆိုပြီး သြဝါဒကြမ်းကြမ်း ပေးတတ်တယ်။
စာမဖတ်ရင်လည်း ဆူပူလေ့ရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ထွက်သမျှ ကမ္ဘာကျော်စာအုပ် သွားလေရာ ဆောင်ပြီး ဖတ်တယ်။ ဖတ်ရုံမက အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ရုံးစရိတ်နဲ့ ကော်ပီကူးပြီး ဖတ်စေတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေကို ဆရာကျော်ဝင်းကိုလည်း ပေးလေ့ရှိတယ်။ နောက်တော့ ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ ဘာသာပြန်တွေ အဖြစ် ထွက်လာတယ်။
ဆရာကျော်ဝင်းက ဖရန်စစ်ဖူကူယားမားရဲ့ စာတမ်းတစောင် ရုံးမှာအကူအညီတောင်းလို့ ရှာပေးရတာ မှတ်မိသေးတယ်။
စစ်အစိုးရက ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ တော်တော်များများ ရုံးစာအုပ်ဗီရိုထဲမှာရှိတယ်။ ဖတ်ခဲ့ရတာ တထောပဲ။ အဲဒီတုန်းက နေသန်မောင် ဘာသာပြန်တဲ့ စာနယ်ဇင်းလက်စွဲ အကျဉ်းချုပ် ဘာသာပြန်လေးလည်း တွေ့တယ်။ မိတ္တူကိုစာအုပ် လုပ်ထားတာပေါ့။
“ပညာသင်ဆုတွေ ပေးနေတယ်။ မြန်မာတွေ မရတာ နှမျှောဖို့ကောင်းတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သွားကြပါ။ ခင်ဗျားတို့ မသွားရင် ကျနော် သွားမယ်” လို့ တိုက်တွန်းဖူးတယ်။
ရုံးက အလုပ်တဖက်နဲ့ ကျောင်းတက်ဖို့ ကြိုးစားခွင့် အပြည့်ရကြတယ်။ အသုံးချ စီပွားပညာဌာန (လှိုင်ကောလိပ်)၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (ဘာကလေ)၊ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်၊ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျာမနီက တက္ကသိုလ်တွေမှာ အယ်ဒီတာတွေ ပညာသင် ထွက်ကြတယ်။
ပြန်မလာသူမလာ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ သွားသူသွား။ မျိုးဆက်တခုကိုတော့ သူ့အလုပ် အပဲ့ခံပြီး သူတတ်နိုင်တာ ထူထောင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူချခဲ့တဲ့ မျိုးစေ့ အချည်းနှီး မဖြစ်တန်ရာ။
သူဆေးကျောင်းပြီးစ ဟောက်ဆာဂျင် ဆင်းနေတော့ တနေ့မှာ ပုခုံးပေါ်က ဂျူတီကုတ်က ဆေးရုံက အဆင်း ပြုတ်ကျတယ်။ သူကုန်းကောက်မယ် လုပ်တုန်း ဆေးရုံစောင့်က ကမန်းကတန်း ကောက်ပေးတယ်။ သူက စဉ်းစားပြီး ဂျူတီကုတ်ကို အစောင့်ကို ပေးခဲ့ပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီကတည်းက ငါ ဆရာဝန် မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်လို့ သူ ပြောခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်ဘဝကို ကျောခိုင်းခဲ့တယ်။ အခု သူခုံမင်တဲ့ နောက် လောက တခုမကကို ကျောခိုင်းသွားပြီ။
၂၀၀၇ မှာ သူ့ရုံးခန်းထဲ တွေ့ကြတယ်။ ဘဏ်တွေရဲ့ လည်ပတ်ပုံနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လွဲချော်နေပုံတွေ သူက ဘုတ်မှာရေးရင်း ရှင်းပြတယ်။ အင်ဖရာစထရက်ရှာတွေဟာ အချိန်ယူရမယ်လို့ ကျနော်ကငြင်းတော့ ခင်ဗျားပြန်ပြောတာ ကြိုက်တယ်လို့ သူပြောတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ်အငွေ့တွေနဲ့ ထင်တလုံးဖြစ်ကာစ …။
မကြာခင် လူမှုပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ကြည့်နေ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာနှုန်းနဲ့ ယှဉ်ရင် တလွဲတချော်ဖြစ်နေတဲ့ လောင်စာဆီစျေးနှုန်းလိုမျိုးလို့ သူ ပြောခဲ့တယ်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်းရေးကို သိပ်မကြာခင် ကျနော်တို့ မြင်လိုက်ရတယ်။
၂၀၀၈ မှာ နာဂစ်ကူညီရေး မြန်မာပြည်ပြန်တယ်။ သူနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။
ကျနော်တို့ကို ပညာတော်သင်အများအပြားလွှတ်ခဲ့တာဟာ တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့် အီးဂရက်စ် အတွက် ဖြစ်တယ်။ တော်တော်များများ တာဝန်ကြေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ အယူအဆ မတူမျှတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
အရင်လို ဘန်ကောက်ရောက်ရင် ဟေ့ … ကျနော့်ဖုန်းအကောင့်ထဲ ၁၀၀ ဖိုးလောက် ထည့်ပေးပါဗျာ။ လေယာဉ်စောင့်ရင်း ဖုန်းပြောချင်လို့ပါ ဆိုတဲ့ အီးမေးလ်တွေ သူမပို့တော့ဘူး။
ဟိုစဉ် LC မှာ လုပ်တုန်းက ကျနော်က တကိုယ်ရည်သမားဆိုတော့ အင်တာနက်ရှိရာ ရုံးမှာလည်း အိပ်ချင် အိပ်တတ်တယ်။ တညမှာ မူးမူးနဲ့ ရည်းစားဆီ မေးလ်ပို့တော့ N ချင်းမှားပြီး ရည်းစားအတွက်စာက သူ့ဆီရောက်သွားတယ်။
သူက ကျနော် ရှက်မှာစိုးလို့ ထင်ရဲ့၊ သူကတိုက်ရိုက်မပြောဘူး၊ အယ်ချုပ်ကတဆင့် ပြောခိုင်းတယ်၊ သေချာလည်း မေးလ်ကို ပို့ပါဦးတဲ့။
မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဆရာနေ့ကို ဘာပြောရပါ့လို့ ကြံဖန် စိတ်အိုက်ဖူးတယ်။
“မိန်းမရပြီးရင် ယောက္ခမအိမ်မှာ နေရတာ မကောင်းဘူး” လို့ ရည်းစားများတဲ့ကျနော့်ကို သူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီး ကြံကြံဖန်ဖန် အကြံပေးဖူးတယ်။
သူက ပုဆိုးစွန်တောင်ဆွဲ၊ သောမတ် ဖရစ်မင်းရဲ့ စာအုပ် ချိုင်းကြားညှပ်၊ ရုံးထဲ ဆောင့်ဝင်လာပြီး ခေါင်းမာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို တစ်တစ်ခွခွ ဆဲလေ့ရှိတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက သူ့အကြံပြုချက် မဖတ်မှာစိုးလို့ အသံသွင်းပြီး ပေးဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီ အရောင်လွင့်၊ ဆံပင်ရှည်၊ ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ အရက်မူးနေတတ်တဲ့ ကျနော့်ကို သူက အယ်ဒီတာ့အာဘော် ရေးခိုင်းဖူးတယ်။
သူက လေထန်ကုန်းကို မကြိုက်ဘူး။ ကိုခင်ဝမ်းဟာ နိုင်ငံတော်အလံကို ဒီဇိုင်းအသစ်ဆွဲဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောတတ်တယ်။
သတင်းအစည်းအဝေးတွေမှာ သူရှိရင် လူငယ်သတင်းထောက်၊ အယ်ဒီတာတွေ ပြောချင်တာ မပြောရဲမှာစိုးလို့ ခပ်ဝေးဝေးသွား ဆေးလိပ်သောက်နေတတ်တယ်။
နှစ်သစ်ကူးပြီ။ လူကလည်း ထွေလာတယ်၊ မအိပ်ချင်သေး။ ဒါနဲ့ အွန်လိုင်း တက်လာတယ်။
ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် ဆုံးပြီတဲ့။ နောက်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
အလဲဗင်းက ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ ပြီးတော့ မြစ်မခ၊ ပြီးတော့ ဆဲဗင်းဒေး … ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အစီအရီ တွေ့တော့ တကယ်ဆုံးပြီလို့ သိလိုက်တယ်။
ကျေးဇူးဆိုတာ မမေ့စကောင်းဘူး။ သူအားပေးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိဖူးတယ်။ သူတိုက်တွန်းလို့ ဘွဲ့လွန်ပညာလည်း သင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ဖုန်းကို ဘယ်လို ဖြေသင့်တယ်၊ နာမ်စားဘယ်လို သုံးသင့်တယ်ကအစ ရေနည်းငါး ကျနော်တို့ကို သင်တာ မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့အယူအဆကို မျှခဲ့တယ်။
သူဟာ လူငယ်တွေကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာ တအားသန်တယ်။ ခေတ်ကို ကြိုပြီးမြင်လွန်းရာကျတယ်။ သူ့လို မြင်တတ်သူတွေအများကြီးဟာ အာစေးထည့်ထားပေမယ့် သူက အမိုက်ခံပြောတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒဇောတွေကို ဆေးလိပ်နဲ့ ထောက်ကူတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီနှစ်ခုကပဲ သူ့ကို သတ်သွားတယ်။
သူကိုယ်တိုင် ဆေးရုံကို ကားမောင်းသွားတယ်။ မရတော့လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့တယ်။ နောက်ဆုံးရေတခွက် တိုက်တယ်။ မရဘူး ပြန်အန်ထွက်တယ်။ အသက်လည်း ပါသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းကို မေးတယ်၊ သူဘာပြောသွားသေးလဲ လို့ … ဘာမှ မပြောနိုင်ရှာတော့ပါဘူးတဲ့။
ကျနော့်ဘေးနားက ဖြတ်သွားတဲ့ ခေတ်တခေတ် ဒီနေရာမှာ ပြီးတယ်။
(ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (၁၉၆၂-၂၀၁၂) အတွက် အမှတ်တရ)
← PS	Caricatures by KUM →	13 comments on “က်ေနာ့္ေဘးနားက ျဖတ္သြားတဲ့ ေခတ္”
Anonymous on January 1, 2012 at 9:38 pm said:
ကိုသင္ကာ ၊ လာဖတ္သြားတယ္။ မွ်ေ၀ၿပီးေတာ့လဲ ခံစားသြားတယ္။ က်ေနာ့္ အမလဲ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းလို႔ သူ႔တပည့္ ျဖစ္ခ့ဲဖူးတယ္။
Reply	Kyawhtoonaing on January 2, 2012 at 12:26 am said:
က်ေနာ္ ဆ၇ာ့၇ဲ႕ ေကာင္းသတင္းေတြ ကို ၾကားရလို႕ နုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႕၀မ္းသာမိပါတယ္။က်ေနာ္တုိ႕ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ပညာေတြကို ေလ့လာမွ်ေ၀ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္ ေကာင္းရာသုဂတိ မွာေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ပါေစလုိ႕ က်ေနာ္နဲ႕ KMD (ေျမနီကုန္း)မွ ABE ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးပါတယ္ဆရာ သာဓု သာဓု သာဓု
Reply	Anonymous on January 2, 2012 at 3:49 am said:
ခုလဲႏုိင္ငံကိုစိတိပူစြာ နဲ႕ 2012 ေဟာကိန္းဆို တာကိုေရးျပီး LC ကို စြန္႕ခြာသြားေလရဲ႕
Reply	လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on January 2, 2012 at 10:08 am said:
ကုိသင္ကာ ေက်းဇူးဗ်ာ။ အခုမွ ေသခ်ာလာဖတ္တာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုပညာတတ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ပါေကာလား….။
Reply	Anonymous on January 2, 2012 at 11:11 am said:
Reply	ံHtar Htar Ei on January 2, 2012 at 12:48 pm said:
အစ္ကိုေရ စာေလး ေကာင္းလိုက္တာ.. စာဖတ္ရတဲ့ခ်ိန္ ခံစားရတဲ့ အၾကည္ဓာတ္ေလး ျပန္ရလိုက္သလိုပါပဲ.. က်ေတာ္လည္း စာေတြ မဖတ္ျဖစ္တာ မေရးျဖစ္တာ ၾကာပါျပီ။ ခ်င္းမိုင္မွာလိုလည္း ရသစာေပေတြ မေရႏိုင္ေတာ့ဘူး.. ဖြ႔ံျဖိဳးေရးသမားေတြ စာဖတ္နည္းတယ္ဆိုတာ မွန္မယ္ထင္တယ္.. စာဖတ္ဖို႔ကို အခ်ိန္ကို မရွိေတာ့တာ..ဆရာေန၀င္းေမာင္ စြန္႔ခြာသြားျခင္းကို ႏွေျမာစိတ္နဲ႔ ၾကီးစြာ၀မ္းနည္းမိပါတယ္.. အစ္ကို႔ကိုလည္း ျမန္မာျပည္ျပန္လာျပီး ျမန္မာျပည္ထဲကေန ျမန္မာျပည္တြက္ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္ပါေသးတယ္🙂
Reply	kyaw Min Naing on January 2, 2012 at 6:17 pm said:
ွဆရာေန ဆုံးျပီဆိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ တကယ္မဟုတ္ပါေစနဲ႕ ဆုေတာင္းမိတယ္…
Reply	Anonymous on January 2, 2012 at 6:47 pm said:
ေကာင္းလိုက္တာ…ကိုသင္ကာ၊ ရင္ထဲကို နင့္ေနတာပဲ။
Reply	Aye Lei on January 2, 2012 at 6:54 pm said:
ကၽြန္မနဲ႔ အျမင္ခ်င္းမတူခဲ့ေပမယ့္ ဆရာ့ကုိ လူေတာ္တစ္ဦးလို႔ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။
Reply	ttnu on January 2, 2012 at 11:52 pm said:
ဖတ္ၾကည္႔ျပီးႏွေမ်ာမိ၊ စိတ္မေကာင္းမိ၊ စာနာမိသြားတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။
Reply	ကလ်ာ on January 4, 2012 at 1:20 am said:
လာဖတ္ၿပီး ခံစားသြားပါတယ္ ကိုသင္ကာ။
Reply	oakkar7 on January 5, 2012 at 7:32 pm said:
အၾကည္ဓါတ္ေတြ ေလ်ာ႔ပါးလို႔ online မွာ ဘာမွမေရးျဖစ္ဘူး ….ဒီစာဖတ္ျပီး သူ႕အေပၚ အျမင္မၾကည္တာေတြေလ်ာ႔ပါး သြားပါတယ္…
သူ႕ပုံရိပ္ေတြ ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္ဗ်ာ … ထပ္ေရးေရးပါဦး …
Reply	Thiha Hlaing on January 31, 2014 at 3:48 pm said:
စဲပါ ။ေအာင္ထြဠ္ရာ။ငါလုိေကာင္ကုိ အျမင္ေတြဖြင့္ေပးခဲ႔တာ။